I inkungu kancane esakaza ngaphesheya phansi isitsha, ibekwe ngqo phezu kwetafula, ngokushelela egeleza ngalé kwemingcele yayo kanye ukuncibilikisa phesheya njengoba izidakamizwa engaziwa futhi bemilingo, cishe ngabe simangaze abaningi. Le miphumela udale i-movie Hollywood kudlulisa umoya ongaqondakali futhi enchanting noma sibhebhetheka lesi simo. Okunjalo kubonakala azinakwenzeka, ngakho fantastic futhi engaqondakali.
Bambalwa abantu bazi ukuthi imiphumela enjalo kungenziwa kalula ukudlalwa emuva efulethini evamile edolobheni, kufanele usebenzise i-generator inkungu esifanelana kalula kwedeski futhi ngeke kuphela kwenza umoya kumnandi, kodwa futhi "enempilo" Igumbi kuphela. Kodwa kwenkululeko le divayisi ngobubanzi okuningi kuka lo conditioning air noma ukudala imiphumela ekhethekile.
Inkungu ugesi okuthiwa amadivayisi akwazi futhi sishaye aerosol - ngokuvamile particulate izidakamizwa ehlanganisa izinhlayiya ezincane sisemoyeni noma isigaba bahlakazeka. izinhlelo ezifanayo ziye zasetshenziswa emikhakheni eminingi yomsebenzi womuntu:
Medicine - ukwelashwa izindawo ukubhubhisa eziyingozi amagciwane kanye Amagciwane.
Ezolimo - inkungu generator spray zinambuzane - ubuthi obulalayo ngoba izilokazane, izinambuzane - olwenziwe kanjalo decontamination kwezakhiwo emfuyo nokubhujiswa azikho yini izimbungulu, amaphela, namagundane.
Fire lokulwa - elakhiwe aerosols zivimba ukugeleza komoya emlilweni kwemizi futhi ngokushesha okwasekhaya kuleyo umlilo.
Air conditioning - bahlakazeka kuphuma amafutha anephunga elimnandi futhi uhlale isikhathi eside emoyeni, musa kuxazulule lokho ngesikhathi esifanayo kudala iphunga elimnandi kanye moisturizes emkhathini.
Film - ngokudala intuthu ngemuva kokudubula Silingisa 'ehamba phezu kwamafu ", kanye inkulumo anda ukukhanyisa imiphumela.
Kunzima ukukholelwa ukuthi generator inkungu nokuba ezifanayo ukusebenza wesifunda ongenza ibanga kangaka okudingeka imisebenzi ehlukene. Yiqiniso, amadivayisi zezimboni nendlu benezingane eziningi umehluko, kodwa Umsebenzi wabo ukubeka omunye futhi isimiso esifanayo.
ugesi Mechanical futhi Thermo
Zonke ugesi inkungu zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili eziyinhloko - mechanical Thermo-lokukhanda. Inqubo esetshenziswa kabanzi umkhuba umsebenzi wabantu Uhlobo lokuqala kudivayisi, ngoba isakhiwo esilula, ezinamanani aphansi futhi ongaphakeme kahle. Cold inkungu generator izifutho aerosols kuphela ngenxa umthelela lokukhanda.
I Thermo-mechanical ukufaka ezakhiwe isigaba athutha bahlakazeka ihlinzekwa Ukushisa isici noma ekamelweni omlilo lapho vaporized futhi ngokusebenzisa umlomo wombhobho njengoba umusi ku imvelo. Izinzuzo oscillators Thermo-mechanical kungenziwa ngokuthi yizinhlobonhlobo (bangakwazi ukwakha ukufingqa aerosols futhi mechanical) kanye aerosol obukhulu ugcwalisa isikhala afakiwe.
Umgomo we operation ye imishini
Mechanical inkungu generator ukhiqiza aerosols bahlakazeka. Yena, kungokokwakhiwa zenyathi eziningana:
Womoya. Aerosol Ukwakheka olufuthwe endaweni ezungeze jet igesi. Negesi ihlinzekwa ngaphansi umfutho ophakeme futhi ngokoqobo ezidabula isakhiwo ibe izingxenye ezincane - iconsi. Usayizi droplet futhi ngalesosizathu degree of atomization is kushintshwe ngokushintsha a Isivinini jet.
Ultrasonic. Lapho kwakhiwa amadivayisi enjalo liyisici isixwayisi e ultradiapazone. Ngokuvamile, lokhu ipuleti piezoelectric noma idiski sobumba. Into isixwayisi at a imvamisa eliphezulu, "amakhefu" futhi spray kwengoma.
Disc. Ngo kumadivayisi ezifana le amadiski ngokushesha ujikelezisa iza ingxube aerosol okuyinto ngaphansi kwethonya ukusheshisa centrifugal olufuthwe imvelo.
Idivayisi mechanical ubizwa nangokuthi njengoba abandayo inkungu generator. Lokhu kungenxa yokuthi esigabeni ziyasakaza ubumbe okufanayo kuma lokushisa emoyeni. izakhi Heating kule nqubo akazange iqhaza.
Ukusetshenziswa inkungu ugesi ekhaya
Ukwakha isimo ekhethekile endlini, ukusimama umoya kuphela imishini asetshenziswa kanye emagcekeni ejele. Ngokuvamile, lokhu ugesi ultrasonic, lapho indima element isixwayisi wenza okukodwa noma ngaphezulu nolwelwesi nxazonke fomu. Kusukela inombolo bese ububanzi we ulwelwesi incike ukushuba spray amanzi.
Ukuze silondoloze ukusebenza kule imishini lidinga ukuhlanzwa njalo futhi esikhundleni ulwelwesi. Idivayisi inkungu generator ukusetshenziswa ekhaya futhi singafaka amapuleti piezoelectric. Kulokhu, impilo kudivayisi angabhekwa elingapheli. Amadivayisi anjalo bahlinza 220V amapayipi.
Inkungu generator aqaphe ekhaya lakho
Ukuqala kokusetshenziswa inkungu ugesi ohlelweni umlilo-flue kuyinto isixazululo ezintsha okuyinto ngokuphindiwe waqinisekisa abheke ukuthi kungenzeka yayo. Wokuqashwa umklamo onjalo kusekelwe nokuxhumana ethungatha amadivaysi Ukungena futhi aerosol nebulizers.
Endabeni ka Ukungena okungagunyaziwe isignali inkomba sidla ukulawula oda kudivayisi starting kanye aerosol ingxube spray inkungu generator. Umsebenzisi amazwana abonisa ukuthi wahlangana endleleni yakhe isithiyo ngesimo intuthu, lowo okonile uncamela ashona kunokuba ngiqhubeke ukuhlaselwa kwabo.
Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe ugesi inkungu
Yisho okuthile ezithize mayelana izindleko zasendlini Generating inkungu ngeke zisebenze. intengo yawo ixhomeke imingcele eminingi. Kuyinto omunye isimiso belinganisa wokusebenza, ukushuba sishaye amandla ezweni lendabuko.
Ithonya okuncane kanye izesekeli, ezifana izibani LED noma isihlenga elintantayo, okuvumela ukusetshenziswa encane Echibini inkungu generator. Inani amadivayisi, kufaka phakathi ukushintshwa, uqala zikhule ruble 2 000.
Ngaphezu kwalokho, izindleko uqala zikhule silingane izici lobuchwepheshe amandla ephakeme nemisipha Ngaphezu kwalokho, ezibizayo iyunithi kuyoba. Ngakho, i-generator ne 12 akwazi ukugcina Ceramic futhi 300W kuyodingeka bakhokhe angaba yizinkulungwane 23. Ruble. Iseluleko ukuthi kumele inikwe abathengi - ukuthenga izimpahla kuphela ezitolo ezicwaningiwe.